साहित्य Archives - Khaptad Aawaz
तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुको शव संकलन गरी काठमाडौं ल्याइने भएको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका २ सानुसरे भन्ने भिरमा जहाज दुर्घटना भएको अवस्थामा आज बिहान भेटिएको थियो । अहिले त्यहाँ सेना र स्थानीयको टोलीले शव संकलन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार १४ जनाको शव भेटिएको छ । नागर...
कविता :- "नेता ज्यू" सुदूरको गाउँबाट बल्लतल्ल हो म तिम्रो सहर पसेको थिए बिरामी बुवा बोकेर रहरले थिएन, शहरले दिएन, मेरो बुवाको उपचार गर्न मेरो बुबा बोकेको एम्बुलेन्स कुददै गर्दा अस्पताल तिर नेता ज्यु को बन्दपरेछ। म गाउँले गोठालो लाई केथाहा मेरो भन्दा बढी नेताले भेडा पाल्दा रहेछन । नेताज्यू भेडा चराउन जाँदै गर...
देउडा सुदूरपश्चिमको मौलिक संस्कृती मात्र होईन , पहिचान पनि हो । देउडा बाट यहाँका मानिसहरु आफ्ना दुख बेदना मात्र पोख्ने नभई शुख ,दुख, माया, प्रेम,उमगं र आनन्द बाड्ने माध्याम पनि हो । पछिल्लो समयमा देउडा गित लोप हुने अबस्थामा पुगे पनि यहाँका केही यस्ता दिग्गज ब्यत्तिmहरु यसलाई जोगाई राख्नका लागी अहोरात खटेका पनि छन् । सम...
“असल मान्छे” “१” माटोको माया त्यसैको सुवास, जीवनको सारहो । युगौको दुःख विर्सने मान्छे, धर्तीको भार हो ।। मानिस हामी असल वनौँ म ठूलो नमनौ । असल त मान्छे सदगुणले हुन्छ, सम्पती नगनौँ ।। “२” संघर्ष गरे अमृत वन्छ, वडराउ दुःखमा । सुख र दुःख दिन र रात नमात सुखमा ।। कर्मशील मान्छे महान वन्छ, चम्किन्छ जगतमा । वेइमानी,...
मिनेश अबिरलको कबिता , पढ्दा पढ्दै आँशु झर्यो
पढ्दा पढ्दै आँसु झर्छ-- ~ मान्छे तिम्रोमा पनि आए.. मेरो मा पनि आए।फरक यति थियो तिमिलाइ रातो सारी लिएर आए मलाई पहेलो पिताम्बर लिएर आए !!! ~ तिमी पनि पहिरियौ मलाई पनि पहिराए । फरक यति थियो । तिमी रातो बेहुली कपडामा पहिरियौ। मलाई पहेंलो कात्रो पहिराए!! ~ मान्छे त्यहाबाट पनि निस्के..यहाबाट पनि निस्के।फरक यति थियो ...
भावना थापा “ मुस्कान”का तिन मुक्तक
१ आफ्नो जिन्दगी बन्दकी राखेर मलाई पढाएको हो । परदेशमा रगत र पसिना बेचेर मलाई पढाएको हो। आमाको निस्वार्थ माया र बुबाको संघर्षलाई बुझिन। त्यो घाम पानीमा भारी बोकेर मलाई पढाएको हो। २ कठै! ऊ मरीसकेकी छे भनेर सुनाई दिनु है । हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनी फूल चढाई दिनु है । मलामी पनि खोजेर आउँनु प्यारा तिम...
डियर प्राप्तीका, लेखौं र नलेखौंको दोधारबीच धेरै वटा कपीका पन्ना डस्टबिनमा फालिसकेपछि केही शब्दहरु जुटाएको छु । मुटुको चाल बढेको छ, धड्कन बाहिरसम्म महसुस गरिराखेको छु । यसैगरी मुटुको चाल बढ्थ्यो तिमी मेरो नजिक आउँदा, ओठहरु पूरै सुक्थे, शब्द निक्लिन गाह्रो हुन्थ्यो, पानीका गिलास धेरै पटक रित्याउँथे र सामर्थ्य जुटाउँथे...
साता सार्वजनिक चर्चामा रहेको पुस्तक हो– योगमाया । अमेरिकामा बसोवास गरिरहेकी नीलम कार्की निहारिकाको नयाँ उपन्यास हो, ‘योगमाया’ । र, यो गम्भीर विषयमा लेखिएको मात्र नभई लामो अनुसन्धानपछि बजारमा आएको पुस्तक हो । सत्य घटनालाई उपन्यासमा ढाल्न लेखकले निकै मेहनत गरेको देखिन्छ । कृति लेख्न कतिसम्म मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने यसले...
काठमाडौं । चर्चित कार्टुनिस्ट दुर्गा बराल अर्थात वात्सायन ५३ वर्षअघि पोखराको आर्वाबाट कला सिक्न काठमाडौं आए । काठमाडौंमा विसं. ०२१ सालमा उनको भेट तत्कालीन पत्रकार एवं अहिलेका परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेसँग भयो । काठमाडौंमा त्योबेला पाण्डेको सम्पादनमा ‘नयाँ सन्देश’ पत्रिका निस्कन्थ्यो । त्यही पत्रिकामा कार्टुन बनाउने...